भाजपाले अचानक किन बदल्यो पश्चिम बंगालमा रणनीति ?
एजेन्सी | जेठ २७, २०७६ सोमबार | 0
पश्चिम बंगालमा सन् २०२१ को विधानसभा चुनावका लागि भारतीय जनता पार्टीले कम्तिमा २५० सिट जित्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । २९४ सदस्यीय विधानसभामा भारतीय जनता पार्टीको ‘मिसन २५०’ एकदमै ठूलो लक्ष्य हो । यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि नै भारतीय जनता पार्टीले टीएमसी, कांग्रेस र सीपीएमका नेताहरुलाई आफ्नो पार्टीमा सामेल गराउने एक अभियान चलाएको थियो । पार्टीलाई यो अभियानले धेरै सफलता पनि मिल्यो र कैयौं विधायक, काउन्सिलरहरु टीएमसीका अतिरिक्त अन्य विपक्षी पार्टीहरुलाई बाई भन्दै भारतीय जनता पार्टीमा प्रवेश पनि गरे । तर, पार्टीले अचानक यो अभियानलाई रोक्ने निर्णय गरेको छ । अब सम्झिनुपर्ने कुरा यो छ कि आखिर पार्टीले कुन मजबुरीमा यस्तो फैसला गर्नुपर्ने भयो ?
‘मिसन २५०’ पूरा गर्ने लक्ष्य
सन् २०१९ को लोकसभा चुनावमा पश्चिम बंगालमा भारतीय जनता पार्टीलाई मिलेको ४०.५ प्रतिशत मतले पार्टीका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म कैयौं गुणा हौसला बढेको छ । लोकसभामा पार्टीले आफ्ना सांसदहरुको संख्या २ बाट बढाएर १८ पुराइसकेको छ । अबको लक्ष्य विधानसभामा रहेको ६ जना सांसदहरुको संख्या २५० पुराउने रहेको छ । यसपटकको लोकसभा चुनावले पश्चिम बंगालको दशकौंको राजनीतिक दशा र दिशा नै बदलिदिएको छ । ममता बनर्जीको टीएमसी पार्टीका सांसदहरुको ग्राफ ३४ बाट घटेर २२ मा सीमित भएको छ । कांग्रेस ४ बाट घटेर आधा भइसकेको छ र ३४ सालसम्म एकछत्र राज गरिसकेको सीपीएम या लेफ्ट फ्रन्टले खाता समेत खोल्न सकेन । सन् २०२१ को विधानसभा चुनावको लक्ष्यलाई लिएर पश्चिम बंगालमा भारतीय जनता पार्टीका प्रभारी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भन्छन्, ‘लोकसभा चुनावमा हामीले २३ सांसद जित्ने लक्ष्य बनाएका थियौं ।’
टीएमसी नेताहरु भित्राउने काम रोकियो
भर्खरैसम्म कैलाश विजयवर्गीयले टीएमसीका एमएलए र बाँकी नेता÷कार्यकर्ताहरुलाई क्रमशः भारतीय जनता पार्टीमा सामेल गराउने कार्यका कैयौं श्रृंखला रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्मले चुनावी सभाहरुमा ४० जना टीएमसीका विधायकहरु आफ्नो सम्पर्कमा रहेको बताउँदै आएका थिए । तर, पार्टीले अचानक यस रणनीतिलाई रोकेको छ । भारतीय जनता पार्टीका एक वरिष्ठ नेताले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘केही समयका लागि टीएमसी नेताहरुलाई पार्टीमा सामेल गर्ने कार्यलाई रोकिएको छ, खासगरी विधायकहरु र वरिष्ठ नेताहरुलाई । अब टीएमसीका नेताहरुलाई पार्टीमा प्रवेश गराउनुअघि क्रस चेकको प्रणाली शुरु गरिने छ । उनले स्पष्ट पारे, ‘भारतीय जनता पार्टीमा केवल उनीहरुलाई सामेल गरिने छ, जो असल नेता छ, जसको छवि जनतामा राम्रो छ र जोसँग संगठन सञ्चालन गर्ने हौसला छ ।
भाजपालाई किन बदल्नु परयो रणनीति ?
वास्तवमा, भाजपामा हालै प्रवेश गराइएका टीएमसीका एमएलए मनिरुल इस्लामको धेरै विरोध भइरहेको छ । भाजपा कार्यकर्ताहरु र नेताहरुले यस्तो शिकायत गरेका छन् कि मनिरुल इस्लाम जस्ता मानिसहरुकै कारण भाजपालाई संकटको सामना गर्नुपरेको हो । यसैले उनको भाजपा प्रवेशलाई बंगालका कार्यकर्ताहरु कुनै पनि हालतमा पचाउन तयार थिएनन् । बंगाल एकाईमा आफ्नो प्रवेशले मच्चिएको बबालपछि इस्लाम स्वयंले पनि राजीनामाको प्रस्ताव गरेका थिए । अन्तमा पार्टीका ठूला नेताहरुले पनि मान्न थाले कि या निर्णय गलत भयो र पार्टीले जुन कुराको विरोध गरेर ममता बनर्जीको सामना गर्दैछ, यदि उस्तै मानिसहरु पार्टीमा सामेल भएमा कार्यकर्ताहरु कुन मुख लिएर जनताको बीचमा जाने ? भाजपाका एक वरिष्ठ नेताले पनि टीएमसीका नेताहरुलाई पार्टीमा सामेल गर्दा आम जनताको बीचमा गलत सन्देश गएको छ । उनले भने, ‘हामी एकदम राम्रो विकल्पको रुपमा उठ्न चाहन्छौं, टीएमसीको प्रतिरुप बनेर होइन ।’
परफरमेन्सको आधारमा बन्नेछ सिटको श्रेणी
सूत्रहरुका अनुसार भाजपाले लोकसभा चुनावमा पार्टीको फरफरमेन्सको आधारमा पश्चिम बंगालमा विधानसभाका सिटहरुलाई ए, बी, सी, डी गरी चार श्रेणीमा विभाजन गर्दैछ । ए श्रेणीमा ती १३० सिटहरु हुनेछन्, जहाँ पार्टीले लोकसभा निर्वाचनमा लिड गरेको थियो । बी श्रेणीमा ती ६५ सिट हुनेछन्, जहाँ सामान्य मतान्तरले पार्टी दोस्रो नम्बरमा रहेको थियो । यस्तै, जहाँ पार्टी दोस्रो स्थानमा रहेको तर हारको मतान्तर धेरै भएको सिटलाई सी श्रेणीमा र जुन सिटमा पार्टी तेस्रो स्थानमा थियो, त्यसलाई डी श्रेणीमा राखिएको छ । ‘मिसन २५०’ लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ‘ए, बी र सी’ श्रेणीका सिटहरुमा पार्टीले धेरै शक्ति लगाउने छ र यी सबै सिटमा जित्नका लागि अहिलेदेखि नै काम थाल्नेछ । यस विषयमा विजयवर्गीयले भनेका छन्, ‘हामी जिल्लाहरुमा र जुन इलाकामा
कमजोर छौं, त्यहाँ पार्टी संगठनलाई सुधार गर्नेछौं । जुन जिल्ला र स्थानीय इलाकामा नेताहरुलाई केवल नियुक्तिका लागि नियुक्त गरिएका छन्, तिनलाई हटाएर राम्रा र कुशल व्यक्तिलाई ल्याइने छ । तर, जो असल संगठनकर्ता र नेता लामो समयदेखि छन्, तिनलाई नयाँ समितिमा स्थान दिइने छ ।’
इलाका अनुसार बन्नेछ मुद्दाको रोडम्याप
भारतीय जनता पार्टीको रणनीति यो छ कि बंगालका अलग अलग हिस्सामा अलग अलग चुनावी मुद्दा उठाइने छ । भाजपाका एक नेताले भने, ‘जस्तै, सिंगुरमा भाजपाले उद्योग बढाउने कुरामा विशेष जोड दिनेछ, जहाँ ममता बनर्जीको नकारात्मक राजनीतिका कारण टाटा मोटर्सले आफ्नो प्लान्ट लगाउन सकेको छैन । यसैगरी सीमा इलाकाहरुमा शरणार्थीहरुलाई नागरिकता दिनेवाला विधेयकमाथि भाजपाले जोड दिनेछ । त्यस्तै, घुसपैठियाहरुलाई बाहिर निकाल्ने मुख्य चुनावी मुद्दा हुनेछ ।’ यस्तै कुनै ठाउँमा खेतीकिसानको मुद्दालाई जोड दिइने छ । भाजपाले उसका १८ सांसद, ६ विधायक र नगरपालिकाका सदस्यहरुलाई आमजनतामा भाजपाको विकास र शासन शैलीको एजेण्डा पुराएर पार्टीप्रति भरोशा कायम गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको छ । यी मुद्दाहरुले गर्दा टीएमसीका हथकण्डालाई मात दिनसक्ने भाजपालाई विश्वास छ ।